Inqubomgomo Yobumfihlo ye-Aplus Global Ecommerce Funda Lokhu
Umgomo wobumfihlo wenziwe ngokucophelela kulabo abafisa ukwazi ukuthi "Ulwazi lwabo Lomuntu Siqu" lusetshenziswa kanjani online. Imininingwane yomuntu siqu isetshenziselwa ukukhomba, ukuxhumana, ukuthola, noma ukukhomba umuntu othintekayo kulo mongo.
Sicela ufunde inqubomgomo yethu yobumfihlo ukuze uqonde ukuthi siqoqa kanjani idatha, siyisebenzisa, siyivikele noma siyisingatha njengewebhusayithi yethu.
Imininingwane yomuntu eqoqwe yithi ngesikhathi sokuvakasha kwebhulogi noma iwebhusayithi
Lapho sigcwaliswa ifomu lokubhalisa nelokubonisana, siqoqa imininingwane elandelayo: Igama Lesivakashi, Ikheli Le-imeyili, Inombolo Yocingo (Ngokuzithandela), neminye imininingwane kuye ngenkonzo okuvunyelwene ngayo.
Siluqoqa kanjani ulwazi?
Siqoqa imininingwane yesivakashi ngesikhathi sokugcwaliswa kwefomu Lokubonisana, Ingxoxo Ebukhoma, noma lapho kubhaliswa kusayithi lethu.
Silusebenzisa kanjani ulwazi oluqoqiwe?
Singasebenzisa imininingwane eqoqwe ngezindlela ezilandelayo:
Ukwenza ngezifiso isipiliyoni sakho nokunikeza uhlobo lokuqukethwe nomkhiqizo ongawuthanda noma ongawathanda ngokuzayo.
Nikeza insizakalo engcono ekuphenduleni umbuzo wakho noma isicelo.
Ukucubungula ukuthengiselana kwakho.
Okwezilinganiso nokubuyekezwa kwezinsizakalo noma imikhiqizo esiyinikezayo.
Ukulandela ngaphambi kokubhalelana (ingxoxo ebukhoma, i-imeyili, noma imibuzo yocingo)
Sivikela kanjani imininingwane yakho?
Asisebenzisi ukuskena okusengozini kanye / noma ukuskena kumazinga we-PCI.
Sinikeza kuphela ama-athikili nolwazi futhi ungalokothi ubuze izinombolo zekhadi lakho lesikweletu.
Imininingwane yomuntu oyabelane nawe ingemuva kwenethiwekhi evikelekile futhi ingafinyelelwa kuphela ngabantu abanokufinyelela okukhethekile kwemininingwane. Kudingeka sigcine yonke imininingwane yakho eqoqiwe iyimfihlo. Futhi, imininingwane ebucayi enikezwe nguwe ibethelwe kusetshenziswa i-SSL (Secure Socket Layer).
Sithatha zonke izinyathelo noma nini lapho ufaka, ufaka, ufinyelela kunoma yiluphi ulwazi ukuqinisekisa ukuphepha okuphezulu.
Konke ukuthengiselana kusetshenziselwa umhlinzeki wesango futhi akugcinwa noma kusetshenzwa kumaseva ethu.
Zonke izinkokhelo zenziwa kusetshenziswa isango lokukhokha futhi ngeke sikwazi noma sihlose ukugcina idatha kumaseva ethu.
Ingabe sisebenzisa 'amakhukhi'?
Sicela imvume yakho ngaphambi kokuqoqa amakhukhi. Ungakhetha ukwamukela noma ukucisha wonke amakhukhi.
Sicela amakhukhi ukuthi ahlinzeke ngomuzwa owenziwe waba ngewakho kakhulu. Ngokucima amakhukhi ezinye izici zewebhusayithi kungenzeka zingasebenzi kepha usengafaka ama-oda.
Ukudalulwa kweqembu lesithathu
Asithengisi, asithengisi, noma sidlulisele noma yimuphi umuntu kunoma yimuphi umuntu wesithathu ngaphandle uma kudingwa isevisi okuvunyelwene ngayo.
Izixhumanisi zenkampani yesithathu
Asinikezi noma yiluphi uhlobo lokunikezwa noma izinkonzo ezivela eceleni.
Izidingo zokukhangisa zeGoogle zingafingqwa ngamaNqubomgomo Wokukhangisa weGoogle. Zenzelwe ukubeka okuhlangenwe nakho okuhle kwabasebenzisi. Bheka Lapha.
Senze lokhu okulandelayo:
Ukumaketha kabusha nge-Google AdSense
Ukubikwa kokubika kwe-Google Display Network
Ukubika kwabantu kanye nezintshisekelo
Thina kanye nabathengisi benkampani yangaphandle, njenge-Google sisebenzisa amakhukhi wenkampani yokuqala (njengamakhukhi e-Google Analytics) namakhukhi enkampani yangaphandle (njengekhukhi le-DoubleClick) noma ezinye izihlonzi zezinkampani zangaphandle ndawonye ukwenza idatha emayelana nokusebenzisana komsebenzisi ukuvela kwesikhangiso neminye imisebenzi yesevisi yesikhangiso njengoba ihlobene newebhusayithi yethu.
Thina nabathengisi bethu abavela eceleni sisebenzisa amakhukhi wenkampani yokuqala (ama-analytics) namakhukhi enkampani yangaphandle (i-DoubleClick Cookie) noma ezinye izihlonzi ezivela eceleni ukuhlanganisa idatha yezikhangiso neminye imisebenzi ehlobene nehlobene newebhusayithi yethu.
Isixhumanisi senqubomgomo yethu yemfihlo sifaka igama elithi 'Ubumfihlo' futhi singatholakala kalula ekhasini elingenhla.
Abasebenzisi bazothola isaziso mayelana nezinguquko zenqubomgomo yobumfihlo:
Ku-Inqubomgomo Yobumfihlo yethu Page
Abasebenzisi bayakwazi ukushintsha imininingwane yabo yomuntu siqu:
Siqoqa ikheli lakho le-imeyili ku:
Ukuthumela imininingwane, ukuphendula imibuzo, kanye / noma ezinye izicelo noma imibuzo.
Ukucubungula ama-oda, ukuthumela imininingwane, kanye nezibuyekezo nge-oda elihambisanayo.
Siyisebenzisela ukukuthumelela imininingwane eyengeziwe ephathelene nensizakalo okuvunyelwene ngayo.
Maketha izinsizakalo zethu zakamuva nokunikelwayo kumakhasimende ethu ngemuva kokuthengiselana kwasekuqaleni.
Uma kwenzeka noma nini ufisa ukuzikhipha ohlwini lwe-imeyili yethu yesikhathi esizayo bese usithumela i-imeyili ku info@aplusglobalecommerce.com futhi sizokususa kuzo zonke izincwadi ezizayo.
Uma kukhona imibuzo mayelana nale nqubomgomo yobumfihlo ungathintana nathi usebenzisa ulwazi olungezansi.
Ingxoxo ebukhoma: https://aplusglobalecommerce.com/
Ucingo: + 1 775-737-0087
Sicela ulinde amahora ayisishiyagalombili kuya kwayi-8 ukuze Ithimba Lethu Lamakhasimende libuyele kuwe enkingeni.